fadeexadda KPLC oo loo jaray warqado lagu soo xirayo – The Voice of Northeastern Kenya
fadeexadda KPLC oo loo jaray warqado lagu soo xirayo
Maxkamada dalka u qaabilsan dhageysiga dacwadaha ku saabsan musuqmaasuqa ayaa soo saartay warqado lagu soo xirayo 12 sarkaal oo ah agaasimayaasha shirkadaha lagu eedeyay in si aanan habboonayn ay lacago uga qaateen shirkadda korontada ee KPLC .
Shirkadahan ayaa loo haystaa inay la waregeen malaayiin shilin oo loogu talagalay KPLC kadib markii ay u fidiyeen adeegyo ku aaddan gaadiidka iyo shaqooyin kale.
Ku xigeenka agaasimaha waaxda dacwad oogista dalka Solomon Njeru ayaa maxkamada u sheegay in eedeysanayaasha qaar aysan xaadir ahayn.
Garsoore Lawrence Mugambi ayaa amar ku bixiyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xiro Jacqueline Wanjiru Mbaria, John Waweru Kangethe, Linet Njeri Ndama iyo Esther Nyambura oo kala ah agaasimayaasha shirkadaha korontada iyo maalgashiga ee Touchline Electrical, Wachema iyo Petsus
Waxaa uu sido kale xaakinka amar ku bixiyay in dacwaddan dib loo soo hadal qaado 20-ka bishan sideedaad.
Waxaa horay maxkamad la soo taagay madaxda fulinta ee shirkadda KPLC Ken Tarus , mas’uulkii ka horeeyay Ben Chumo iyo sarakiil kale oo loo haystay inay soo iibiyeen haamaha korontada qeybiya oo tayo ahaan hooseeya qiimaha ku baxayna lagu sheegay ugu yaraan 409 milyan oo shilin.
Hasa ahaate waxaa lagu siidaayay min hal milyan oo damiin lacageed ah.
← Ururka macalimiinta ee KNUT oo weli ku adkeysanaya shaqa joojin
DHAGEYSO Warka Duhurnimo ee idacada star fm 1:30 PM →